Henri Ratsimbazafy « … Mba ho mpanakanto maro no hihira ny hirako » | NewsMada
Henri Ratsimbazafy « … Mba ho mpanakanto maro no hihira ny hirako »
Goavana ! Andrarezina !… Samy iantsoan’ny tontolon’ny zavakanto an’i Henri Ratsimbazafy avokoa ireo. Hanatontosa fampisehoana afaka andro vitsivitsy ity reharehan’ny hira malagasy ity. Mialoha izay, nisy ny tafa nifanaovana taminy nilazany ny hetahetany amin’ireo hira nohirainy hatramin’izay ka hatramin’izao.
Gazety Taratra (*) : Firy taona niakarana sehatra i Henri Ratsimbazafy ? Inona ny tsiambaratelon’izay ?
Henri Ratsimbazafy (-) : 56 taona niakarana sehatra aho. Tsy misy tsiambaratelo manokana ny nahavitana an’io. Amiko ny hira, natao iresahana amin’ny mpijery na mpihaino. Izaho ihany koa tsy mitomany randrana tsy manendrika ahy. Na izany aza, mihaino ny karazan-kira rehetra aho.
* Tanora tanteraka ny mpitendry sy ny mpanao feo lafika hiaraka aminao amin’ny fampisehoana etsy amin’ny CCEsca Antanimena. Ny anton’izay ?
– Ny hira, tsy sahala amin’ny politika. Izaho tsy hibahan-toerana. Manome traikefa ireo tanora miaraka mihira amiko aho. Na izany aza, misy zavatra ianaranay mpanakanto zoky any amin’ireny tanora ireny. Aza hadinoina fa misy hatrany ny zava-baovao. Tsy azo atao velively ny miteny fa ny ataonay ihany no tsara. Faniriako ny mba ho mpanakanto maro no hihira ny hirako. Anjaran’izay mihira ny sanganasako ny miezaka hihoatra ahy. Any ivelany, tsy zava-baovao ny tahaka izany fa toy ny mandeha ho azy sady efa fanaona mpamoron-kira maro.
*Ahoana ny fahitanao ny ankizy na tanora ankehitriny manoloana ny tontolon’ny hira ?
– Somary marefo ny tononkiran’ny tanora ankehitriny. Tsy ahenoana ventin-kevitra mafonja. Tsy tokony ho tokana ihany, ohatra, ny fomba fanehoana ny fitiavana. Marobe ny endriky ny fitiavana. Karazana sira hitondra fifaliana ao anaty hira ny fitiavana fa tsy voatery hitoreo lava. Olona mizara resaka (resaka ifanakalozana) ny eny an-tsehatra fa tsy olona mitoriteny.
Fampisehoana « The best show » etsy amin’ny CCEsca Antanimena
Ny alahady 20 marsa izao manomboka amin’ny 3 ora tolakandro. Hira 32 eo ho eo no nomanina fa afaka mihoatra an’io. Ankoatra ireo hira nahafantarana azy, hisy ihany koa ny hira vaovao. Feno tanteraka ny mpitendry zavamaneno (tsofina, tendrena, kapohina…), izay saika tanora avokoa. Toy izany koa ny mpanao feo lafika, tovovavy daholo. Hisy mpanakanto efa fanta-daza hihira ny sanganasan’i Henri Ratsimbazafy. Somary hitafy endrika maoderina ny hira « Hodian-tsy hita ve ».
Nomarihin’i Henri Ratsimbazafy fa anisan’ny nanahirana tokoa ny nifantina ireo hira hohiraina amin’io fotoana io satria saika tadiavin’ny olona avokoa ireo hira rehetra tsy afaka eo am-bavany.